कन्सर्टमा देखिएको प्रदीपको क्रेज हलमा के होला ? « Ramailo छ
कन्सर्टमा देखिएको प्रदीपको क्रेज हलमा के होला ?
नायक प्रदीप खड्का ‘रोज’ फिल्मको मोफसल प्रचारमा छन् । मोफसलका मुख्य शहरमा कन्सर्ट गर्दै गरिएको फिल्मको प्रचारमा दर्शकको संख्या उल्लेख्य देखिएको छ । दर्शकको यो सहभागितामा युवा स्टार प्रदीप खड्काको फ्यान क्रेज लोभलाग्दो छ ।
हालसम्म सम्पन्न पोखरा, चितवन र बुटवलको कन्सर्टमा नायक खड्कालाई फ्यानले न्यानो माया दिएका छन् । कन्सर्टमा प्रदीपले पाएको यो माया भदौ २२ गते हलमा ‘रोज’ लाग्दा पनि पाउलान् ? सबैमाझ यो चासोको विषय बनेर आएको छ । प्रदीपसँगै कन्सर्टमा नायिकाद्वाय मिरुना मगर, पारमिता राज्यलक्ष्मी राणा र गायक प्रदाप दास सहभागी छन् ।
उसो प्रदीपका लागि कन्सर्ट फलिफाप बन्दै आएको छ । फिल्म ‘प्रेम गीत २’ र ‘लिलिबिली’ मा गरिएको कन्सर्टले हलमा दर्शक तान्न राम्रो काम गरेका थिए ।
तर पछिल्लो समय रोड कन्सर्ट बेकार बन्दै गैरहेका छन् । केही फिल्ममा कन्र्सटमा देखिएका पाँच प्रतिशत दर्शक पनि हलमा आएका छैनन् ।